Ka dib markii uu arkay ciyaartoydiisa oo ogolaaday in labo gool laga dhaliyo 10kii daqiiqo ee ugu danbeysay ciyaarta, tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa qirtay in si ku meel gaar ah oo ay ciyaartoydiisa diirada uga qaadeen ciyaarta inay keentay in laga badiyo xalayto.​
Garsoore Horre Mark Halsey Oo Tilmaamay Inay Offside Cad Aheyd Goolkii Uu Ibrahimovic Ka Dhaliyay Liverpool.
Garsoorihii h--e ee Premier League Mark Halsey ayaa sheegay in dhismaha goolkii barbaraha ee uu Zlatan Ibrahimovic xalayto u dhaliyay Manchester United inay aheyd offside.
Maqaalkiisa uu ku qoray jariirada The Sun ayuu ku faahfaahiyay sida uu arkay shaqada garsoore Michael Oliver iyo caawiyayaashiisa.
“Garsoore Michael Oliver waxaa hoos u dhigay caawiyihiisa iyadoo goolkii barbaraha ee Manchester United uu ahaa offside cad” ayuu ku bilaabay qoraalkiisa.
“Mick McDonough waxa ay aheyd inuu boos fiican u taagnaado inuu arko kubadii uu Juan Mata u celiyay Antonio Valencia ka dib foori gacanta.
“Waa nin qibrad leh, waxaana uu ahaa garsoore fiican muddo sannado ah, laakiin ma ahan mid ugu taam ahaanshaha fiican.
“Waxaan u baahanahay caawiyayaal da’ yar oo ciyaarta la socon kara islamarkaana arki kara offside sidaan oo kale ah.”
Isagoo ka hadlayay rigooradii laga dhigay Paul Pogba, waxa uu Mark Halsey sheegay inay sax aheyd.
“Paul Pogba wax cabasho ah ma sameyn karo rigooradii uu galay qeybtii 1aad. Michael waa uu ku saxnaa. Waxa uu taagnaa boos sax ah, taas ayaana u fududeysay.
“Pogba durbadiiba waa uu ogaa wixii uu sameeyay, waxaana ay aheyd sax in rigoore laga dhigo.”